Tag: tumblr | Martech Zone
Poptin: Smart Popups, Emdị agbakwunyere, na Autoresponders
Saturday, December 12, 2020 Wednesday, December 23, 2020 Douglas Karr
Ọ bụrụ n ’ị na-achọ igbanye ndị ọzọ na-eduga, ahịa, ma ọ bụ ndenye aha site na ndị ọbịa na-abanye na saịtị gị, obi abụọ adịghị ya na ịdị mma nke popups. Ọ naghị adị mfe dịka ịkwụsịtụ ndị ọbịa gị na akpaghị aka. Popups kwesiri inwe ọgụgụ isi oge dabere na omume ndị ọbịa iji nye ahụmịhe na enweghị nsogbu dịka o kwere mee. Poptin: Popup gị Platform Poptin bụ usoro dị mfe ma dịkwa ọnụ ala maka ijikọta usoro ọgbọ dị ka nke a na saịtị gị. Ikpo okwu na-enye:
Privy: Ọ dị mfe iji, Atụmatụ ike maka inweta ndị ahịa na saịtị
Tuesday, June 25, 2019 Wednesday, December 23, 2020 Douglas Karr
Otu n'ime ndị ahịa anyị nọ na Squarespace, usoro njikwa ọdịnaya nke na-enye ihe niile dị mkpa - gụnyere ecommerce. Maka ndị ahịa na-ahụ maka onwe ha, ọ bụ nnukwu ikpo okwu nwere ọtụtụ nhọrọ. Anyị na-akwado kwadoro WordPress n'ihi ike ya na-enweghị njedebe yana mgbanwe… mana ụfọdụ Squarespace bụ nhọrọ siri ike. Ọ bụ ezie na Squarespace enweghị API na ọtụtụ nde ngwaahịa arụpụtara nke dị njikere ịga, ị ka nwere ike ịchọta ụfọdụ ngwaọrụ dị egwu iji bulie saịtị gị. Anyị
Mọnde, Jenụwarị 15, 2018 Mọnde, Jenụwarị 15, 2018 Douglas Karr
JARVEE bụ usoro dị ọnụ ala nke na-arụ ọrụ n'ọnọdụ ndị otu mgbasa ozi mmekọrịta iji hụ na ihe ịga nke ọma n'ịntanetị gị ga-aga nke ọma site na-eto eto, na-akwọ ụgbọala n'okporo ụzọ, na ịkwọ ụgbọala na-eduga na azụmahịa gị. N'ihi na ọ bụ a Windows dabeere na desktọọpụ software, ọ na-enweghị ọtụtụ nke na-agaghị emeli nke ọrụ API na-atọ ndị ọzọ akpaaka nyiwe. Otu okwu ịdọ aka na ntị, ị nwere ike imebi ezigbo aha gị site na ịgha ụgha na netwọkụ mmekọrịta yana ngwaọrụ dịka nke a. Ọ bụ
Infographic: Akụkọ dị mkpirikpi nke Mgbasa Ozi Mgbasa Ozi
Mọnde, Jenụwarị 1, 2018 Thursday, August 12, 2021 Douglas Karr
Ọ bụ ezie na ọtụtụ mgbasa ozi na -elekọta mmadụ na -ekwupụta ike na iru ahịa mgbasa ozi na -elekọta mmadụ, ọ ka bụ netwọkụ nke siri ike ịchọpụta na -enweghị nkwalite. Mgbasa ozi mgbasa ozi na -elekọta mmadụ bụ ahịa na -adịghị adị naanị afọ iri gara aga mana ewepụtara ijeri $ 11 ijeri site na 2017. Nke a sitere na naanị ijeri $ 6.1 na 2013. Mgbasa ozi mmekọrịta na -enye ohere iji wulite mmata, ebumnuche dabere na mpaghara ala, igwe mmadụ, na data omume. Nakwa,